Lillian of Turin - Mamakia Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics amin'ny Internet
Lillian avy any Turin
Lillian avy any Turin Average 3.5 / 5 avy amin'ny 11
N / A, manana fomba fijery 11K
tantara an-tsehatra, Game, Isekai, Manhwa, biby goavam-be, Mpiasa birao, Romance, Shoujo, Webtoons
Vakiana ianao Lillian avy any Turin, mahafinaritra manhwa.
튜린의 릴리엔 “Rehefa nanome sakafo bibidia noana ianao, dia tokony ho niomana ho amin’izany.”
Tsy te ho reny ratsy sy loharanon'ny ratram-po ho an'ny mpitarika lehilahy tao amin'ny tany am-boalohany aho. Koa nanapa-kevitra aho fa hanamafy ny fifandraisana misy eo amiko sy ny rahalahiko, ary koa manatanteraka ny adidiko mba tsy ho levona ny vadiko.
“Efa voafolakao aho, ka raiso ny andraikitrao.”
Ny vadiko, izay ho lavaka mainty farany amin'ny tantara, dia nanomboka nanao fihetsika mamy, nampiasa ny hatsarany ho fitaovam-piadiana. Miala tsiny aho, fa tsy ny fifandraisanay ara-barotra ve no tsara indrindra?
Chapter 22	Novambra 15, 2021
Chapter 21	Novambra 15, 2021
Chapter 14	Oktobra 31, 2021
Chapter 13	Oktobra 31, 2021
Chapter 12	Oktobra 31, 2021
Chapter 11	Oktobra 31, 2021
Chapter 10	Oktobra 31, 2021
Chapter 9	Oktobra 31, 2021
Chapter 8	Oktobra 31, 2021
Chapter 7	Oktobra 31, 2021
Chapter 6	Oktobra 31, 2021
Chapter 5	Oktobra 31, 2021
Chapter 4	Oktobra 31, 2021
Chapter 3	Oktobra 31, 2021
Chapter 2	Oktobra 31, 2021
Chapter 1	Oktobra 31, 2021
Mpijinja sy mpamosavy